Friday, 10.18.2019, 04:52am (GMT+5.5) Home Contact
“अख्तियार” वालाको ध्यानाकर्षणका लागि (१) तारा सुवेदी
Tuesday, 07.09.2013, 08:37am
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तबाट सूर्यनाथ उपाध्यायले अवकाश लिएपछि त आयोगकै कतिपय निमित्त प्रमुख आयुक्त, आयुक्तहरु नै भ्रष्टाचारी र बढी भ्रष्टाचार हुने भनेर निकै गह्नाएका वा अकूतसम्पत्ति र कुख्याति कमाएका कार्यालयहरुका “गुप्त मासिक वेतन भोगी”का रुपमा रहे भएको समेत धेरैले सुने ।
समस्याको मूल जरो मनको प्रदूषण -महेश्वर शर्मा
Friday, 07.05.2013, 07:17pm
नेपालका सन्दर्भमा यहाँका शासकमा जबजब उन्माद चढ्छ र मनपरी गर्न थाल्छन् तबतब परिवर्तन आउने गरेको देखिन्छ । २००७ सालदेखि पटकपटक त्यस्तै हुँदैआएको छ । सत्ताधारीका गल्तीका परिणाम स्वरुप परिवर्तन आए पनि परिणाम भने कुनै पनि फलदायी भएको पाइएन ।
मुलुकको आर्थिक–सामाजिक विकासको आधार : जनअपेक्षित विकास योजना - यादब देवकोटा
मुलुकमा विकासको गति अन्य मुलुकको तुलनामा निकै सुस्त छ । राजनीतिक प्रतिबद्धताको अभाव, प्रशासनिक निकायको ढिलासुस्ती, वैदेशिक हस्तक्षेप, उनीहरूको रणनीतिक स्वार्थ अनुसारको कार्ययोजना र प्रभाव विस्तार लगायतका अनेक कारणले गर्दा लक्षित नतिजा कहिल्यै प्राप्त हुन सकेको छैन । योजनाबद्ध विकास ढाँचाको आधा शताब्दी पुरानो इतिहास भए पनि नेपालको विकास लक्ष्य अहिले पनि ५० वर्षअघिकै जस्तो छ ।
सिक्किमीकरणको गज्याङ् गुजुङ प्रक्रिया - तारा सुवेदी
Friday, 07.05.2013, 07:14pm
नेपालको भावी सम्भावना बारे प्रक्षेपण गर्न सजिलो छैन । किनकि “देशलाई दिशा निर्देश गर्ने राजनेता नेपाले जन्माएको छैन” भन्नेमा सबै सहमत देखिन थालेका छन् । यस्तो राष्ट्रिय परिस्थिति र परिवेशमा राजनीतिक दूरदृष्टिको नितान्त अभाव भएका, स्वार्थी, भ्रष्ट, दुष्ट, निकृष्टहरू, हैसियत र तागत अनुसार गाउँदेखि केन्द्रसम्म राजनीति गर्ने नेता” को पगरी गुतेर फागुन चैतका खडेरीका दिनका छिचिमिरा झै देखा परिराखेका छन् ।
शैक्षिक गुणस्तरमा निरन्तर ह्रास : युवाहरूलाई विदेशप्रति आकर्षित गर्ने मेसो - यादब देवकोटा
Wednesday, 06.26.2013, 12:16pm
२०६९ सालमा संचालित एसएलसी परीक्षाको नतिजा दश वर्षकै न्यून रह्यो । कूल परीक्षार्थीमध्ये आधाभन्दा बढी अनुत्तीर्ण हुँदा नेपालको विद्यालय शिक्षा विस्तारै ओरालो लाग्दैगरेको मात्र देखाउँदैन कि विदेश मोहलाई नै मलजल गरेको छ । अब हुने खानेका छोराछोरीहरू विद्यालय शिक्षा पनि विदेशबाटै दिलाउने छन् । मुलुकमा यसै पनि हुनेखाने र हुँदा खानेका छोराछोरीबीच शैक्षिक विभेद छ भने अब त्यसले झन् बढावा पाउने देखिन्छ । मुलुकमा युवाहरूलाई स्वदेशभित्रै आकर्षित गर्ने संयन्त्रको विकास नहुँदा नेपाली युवाहरूले सुरक्षित भविष्यको मार्ग विदेश मात्र देख्ने गरेका छन् ।
जनताको नाम लिएर जनताकै ढाड भाँच्नेहरू - महेश्वर शर्मा
Wednesday, 06.26.2013, 12:14pm
निर्वाचनको मिति घोषणा भैसकेको छ । भित्र विरोध र अवरोध भए पनि बाहिरकाले समर्थन गरिसकेका हुनाले निर्वाचन त शक्तिका बलमा पनि हुनसक्छ र संविधानसभा पनि बन्ला तर आजकै जस्तो अराजक स्थितिमा कामलाग्ने संविधान बन्ला र त्यो जनअनुमोदित संविधान होला भनेर नपत्याए हुन्छ । खास गरी चारदले नेता पहिचानको कुरा गर्छन् । उनीहरूको पहिचान भैसकेको छ । दश एघार वर्ष उधुम र विध्वंश मच्चाएर माओवादीले आफ्ना पहिचान दिएको छ भने कांग्रेस–एमालेले पनि देशलाई आजको बेहाल स्थितिमा पुर्याएर नालायकीको पहिचान बनाएकै छन् ।
रेग्मी सरकारबाट घोषित निर्वाचन बारे (२) - तारा सुवेदी
Wednesday, 06.26.2013, 12:12pm
यथार्थमा संविधान सभाको निर्वाचन ‘लड्न चाहने र भाँडन चाहने’को हुन् भनेर यकीन साथ भन्नसक्ने स्थिति छैन । कारण छर्लङ्ग छ । अहिले एक या दुई दलबाहेक सबैलाई यस बेला निर्वाचनमा जाँदा के मुद्दा लिएर जाने, “जनताले” दुई वर्षमा संविधान बनाउनु पर्ने संविधानको धारा ६४ को पटकपटक मनलाग्दो संशोधन गरेर चार वर्षसम्म अर्बौ राजश्व पचाएर संविधान दिन नसक्नेले कुन मुख देखाउन आइरहेछौ ? अब फेरि तिमीलाई नै भोट दिए संविधान बन्छ भनेर कसरी पत्याउने ? यस्ता सहस्र प्रश्न गर्ने डरले सताएको छ ।
“कसैले कसैलाई निषेध नगरौं” : पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र
Wednesday, 06.26.2013, 12:10pm
नेपालका गाउँठाउँ घुमौं र नेपाली जनतालाई भेटौं भन्ने भावनाबाट म सदा प्रेरित रहेको छु । त्यसैले हिमाल, पहाड र तराई पुगेर देश दर्शन गर्नें अनि देशवासीहरूका सुख दुख बुझ्ने मेरो एक नियमित प्रक्रिया बनेको छ । यसै अनुरुप म अहिले जनक, सीता र बुद्ध जस्ता अनेकौं सुपुज्य पात्रहरूको जन्मभूमिका साथै विद्या, बुद्धि र भगवत सिद्धि एवं अनेकौं मठ, मन्दिर र देवस्थलहरूले भरिपूर्ण रहेको तथा आफ्नै मौलिक धर्म, संस्कृति र ऐतिहासिक गौरव गाथा बोकेर फैलिएको नेपालको उर्वर भूमि तराईका केही जिल्लाहरूको भ्रमणमा संलग्न छु ।
नेताहरूले आफूलाई सुधारेर अघि बढ्लान कि यथास्थितिमै ? - यादब देवकोटा
Tuesday, 06.18.2013, 02:46pm
सरकारले आउँदो मंसिर ४ गतेका लागि संविधानसभाको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छ । मिति घोषणासंगै प्रमुख चार राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू चुनावी दौडाहामा लागिसकेका छन् । उनीहरू आआफ्नो दलको बहुमत मात्र होइन दुई तिहाई नै ल्याउने हुँकार गर्न थालिसकेका छन् । पहिलो संविधानसभाको चार वर्षे कार्यकालमा उनीहरूको असफलता छरपस्ट भए पनि अहिले आएर बिर्सिसकेका छन् ।
भीड र जबर्जस्तीतन्त्रको राज - महेश्वर शर्मा
Tuesday, 06.18.2013, 02:45pm
नेताहरू आफूले मात्र राम्रो गरेको बखान गर्छन् तर आफैंले विगारेका कुरा बिर्सन्छन् । अनि विगारेको र विग्रेको दोष चाहिं लिन चाहँदैनन्, बरु अरुतिर देखाइदिन्छन् । कसले के गर्यो वा गरेन भन्ने कुरा त जनताले विचार गरिरहेका हुन्छन् । आफ्नो बखान आफैं गर्नु मुर्खताको परिचय दिनु मात्रै हो । राजनीतिक स्थिरता र विकासका लागि कानुनी शासनको सर्वोपरि महत्व हुन्छ । तर यहाँ कानुन विपरीत आचरण गर्नेहरू नै ठालू पल्टेका छन् ।
रेग्मी सरकारबाट घोषित निर्वाचन बारे (१) - तारा सुवेदी
Tuesday, 06.18.2013, 02:41pm
ठूला चार “दल”ले सर्वोच्च अदालतको सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशको पदमा पदाधिकार राखी संविधान सभाको निर्वाचन गराइदिन मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष पदमाल्याई विराजित गराइएका खिलराज रेग्मीको नेतृत्वको वर्तमान अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्ले आगामी मंसिर (२०७०) ४ गते मंगलबारका दिन संविधान सभाका लागि मतदानको दिन घोषणा गरेकोछ । निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्तबाट कार्तिक २८ गतेको संभावित मिति बाहिर आइरहेको थियो ।
नयाँ नयाँ नारा मात्र कति फलाक्ने ? - यादब देवकोटा
Wednesday, 06.12.2013, 12:14pm
हरेक वर्षको जुन ५ मा मनाइने विश्व वातावरण दिवस यस वर्ष “सोचेर खाआंै, खानेकुरा खेर नफालांै, वातावरण जोगाऔं” भन्ने नाराका साथ मनाइयो । विश्वमा वातावरण प्रदूषण हुनुमा खाद्यान्न मिल्काउनु पनि एउटा कारण मानिएको छ । त्यसैले खाद्यान्न नफाल्न सचेत पार्ने गरी नारा तय गरियो । दिवसकै सन्दर्भमा प्रकाशित पछिल्लो तथ्यांक अनुसार, विश्वमा अहिले खाद्य असन्तुलनको अवस्था डरलाग्दो बनिरहेको छ ।
खोई नेतृत्व गर्नेहरुको जवाफदेही ? - महेश्वर शर्मा
Wednesday, 06.12.2013, 12:13pm
देशको शासन–प्रशासन चलाउने देशवासीले नै हो अर्थात् जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाले नै हो । तर यहाँ केही वर्षदेखि देशको शासन संचालनमा आईएनजीओ र ट्रेड यूनियनहरुको वर्चश्व कायम छ, उनीहरुकै हैकम छ, सरकार निरीह छ भन्ने सुनिंदै आएको हो ।
“खिलराज रेग्मीको राजीनामा”सँग जोडिएका प्रश्नहरु - तारा सुवेदी
Wednesday, 06.12.2013, 12:11pm
कानुन व्यवसायीहरुको यौटै (एकीकृत) छाता संगठन नेपाल बार एशोसिएशनले “शक्ति पृथक्कीकरणको सिद्धान्त विपरीत हुने र संविधानको धारा १०६ समेतको कारणबाट पनि सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशलाई राजनीतिक दलहरुले सिंहदरबारमा काजमा लगी काममा लगाउन नहुने नमिल्ने भनेर फागुनको शुरुदेखि नै स्पष्ट अडान राख्दै आएको थियो । संचारमाध्यमहरु नै त्यसका देखी, सुनी, जान्ने साक्षी छन् ।
नेताहरूले भन्नुपर्छ– कहाँ कहाँ राम्रो भयो ? - यादब देवकोटा
Wednesday, 06.05.2013, 02:46pm
नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्व र मौलिक संस्कृति मेटाउन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट षड्यन्त्र भैरहेको कुरा आम जनतालाई जति ज्ञात छ त्योभन्दा बढी राजनीतिक तहलाई भए पनि उनीहरू यसबारे चुँ पनि गर्न सक्दैनन् । विदेशीकै इशारा, निर्देशनमा एकपछि अर्को गलत निर्णय गर्न पुगेका नेताहरूले विगतमा गरेको गल्ती सच्याउनसक्ने हिम्मत पनि देखाउन सकेका छैनन् । त्यसैले मुलुकमा यतिखेर सन्तोष गर्नुपर्ने र मान्नुपर्ने कुनै ठाउँ छैन ।
चुनाउ मात्रै समस्याको समाधान होइन - महेश्वर शर्मा
Wednesday, 06.05.2013, 02:45pm
‘संविधान’ भनेको हाम्रा सन्दर्भमा परम्परा अनुसार परस्पर विश्वासका आधारमा सौहार्दतापूर्वक सम्पन्न हुनुपर्ने सम्झौता हो । त्यस्तो सम्झौता पहिले राजा र जनताबीच हुन्थ्यो भने आज जनता जनताबीच हुनुपर्छ । तर अनाडीहरूले स्वार्थका अन्धवेग र परस्परको अविश्वासले गर्दा चार वर्षसम्म राष्ट्रको पन्ध्र–बीस अर्ब रुपैयाँ भुरसी गरेर पहिलो संविधानसभा तुहाइदिए ।
अन्धाहरूले हाँकेको सहयात्रा - तारा सुवेदी
Wednesday, 06.05.2013, 02:42pm
कार्ल माक्र्सभन्दा पहिलेका “द्वन्द्वात्मकवाद”का प्रवर्तक एवं जर्मनीका प्रसिद्ध विचारक हिगेल (१७७०–१८३१) को विचारमा केन्द्रीय तत्व “द्वन्द्ववाद” नै हो । संक्षेपमा द्वन्द्ववादको अभिप्राय के हो भने “जब मानिसको मस्तिष्कमा एक प्रकारको विचार उत्पन्न हुन्छ, त्यसको संपुष्टिका लागि अन्य धेरै विचारहरु पनि उत्पन्न हुन्छन् । त्यसरी यौटा वाद (थेसिस) को जन्म हुन्छ ।
“आफू बाँच्नका लागि अरुलाई पनि बचाऊँ”को नारा इमान्दार प्रयासले मात्र पूरा हुन्छ - यादब देवकोटा
Tuesday, 05.28.2013, 08:06am
सन् १९९४ देखि हरेक वर्षको मे २२ का दिन विश्व जैविक विविधता दिवस मनाउन थालियो । सन् १९९२ मा ब्राजिलमा सम्पन्न पृथ्वी शिखर सम्मेलनले जैविक विविधता महासन्धि पारित गरेपछि यो दिवस मनाउन थालिएको हो । यो वर्षको जैविक विविधता दिवसको नारा “आफू बाँच्नका लागि अरुलाई पनि बचाऊँ” रहेको छ । पृथ्वीमा बढ्दो वातावरण क्षय कम गर्नकै लागि यस्ता दिवसहरू मनाउन थालिएको हो । पानी दिवस, सिमसार दिवस, बाघ दिवस, वातावरण दिवस लगायत अनेक दिवसहरूमा वातावरण संरक्षणप्रतिको चिन्ता जगाउने काम हुन्छ तर काम भने फिटिक्कै केही हुँदैन ।
प्रजातान्त्रिक परिपाटी र प्रतिनिधित्व - महेश्वर शर्मा
Tuesday, 05.28.2013, 08:05am
मान्छेको स्वाभाव छाडापन मनपराउने हुँदोरहेछ । स्वयं अनुशासित नभएकाहरूको बाहुल्य राजनीतिमा भएकैले यो छाडापन देखिएको हो । आफैंलाई संयममा राख्न नसक्नेले दलभित्रको छाडापन हटाएर दलीय स्वच्छता कायम राख्न नसक्नु स्वाभाविक छ । मात्रा घटी–बढी भए पनि प्रत्येक दल अनुशासनहीनताको भासमा गाडिएको छ । फलतः अनियमितता, भ्रष्टाचार र विविध अपराधर्म अनि दण्डहीनता बढ्दो क्रममा देखिएको छ ।
“अख्तियार”को नियति र लोकमानसिंहको नियुक्ति (२) - तारा सुवेदी
Tuesday, 05.28.2013, 08:03am
“नेपाल र नेपालीहरू जस्ता ढोंगी र प्रचण्ड पाखण्डी अरु कोही छैनन् होला । उनीहरू उन्नत कोटीको कानून बनाउन र विश्वमञ्चमा उदारवादी सन्धी समझदारी आदिमा सहमति जनाउन र हस्ताक्षर गर्न जति अग्रसर देखिन्छन्, त्यति नै आफूले प्रतिबद्धता प्रकट गरेका कुरा विर्सन, उपेक्षा गर्न र बेवास्ता गर्न अग्रसर । नेपालबारे राम्ररी गहिरो अध्ययन गरेका अधिकांश विदेशी मित्रहरूको यही वा त्यस्तै निष्कर्ष रहेको छ ।” एकजना अन्तर्राष्ट्रिय सभा, सम्मेलन, गोष्ठीमा निकै सहभागी हुँदै आएका मित्रले सुनाएको सधैं सम्झिरहेको छु ।
» राष्ट्रिय एकता जनतालाई एकसूत्रमा जोड्न सके मात्र - यादब देवकोटा
» नेताको नाम लिनु पनि लाजमर्दो भैसक्यो - महेश्वर शर्मा
» स्पष्ट नीति नहुँदा खानेपानीको हाहाकार - यादब देवकोटा
» सायद यसरी नै बेचिँदो रहेछ देश ! - तारा सुवेदी
» राजनीतिको मर्म नबुझ्दाको परिणाम - महेश्वर शर्मा
» प्राकृतिक स्रोत साधनको सदुपयोग : समृद्धिको आधार - यादब देवकोटा
» बेथितिको पराकाष्ठा र निरीह सरकार - महेश्वर शर्मा
» अब के हुन्छ ? यस्तो हुन सक्छ ? - तारा सुवेदी
» अगाडिकै बाटो त नदेख्नेले पछाडिको भीर के देखुन् - यादब देवकोटा
» आजको स्थिति र हामीले बुझ्नुपर्ने तत्व - महेश्वर शर्मा
» अब के हुन्छ ? नोकरशाही सरकारमा पनि भरपर्छ (६) - तारा सुवेदी
» सीमा अतिक्रमण, बाँध आतंक र तराइवासीको पीडा - यादब देवकोटा
» नेताहरूले त बुद्धिसम्मत काम पो गर्नुपर्छ - महेश्वर शर्मा
» अब के हुन्छ ? (५) - तारा सुवेदी
» नयाँ वर्षमा सबैले गर्नुपर्ने प्रण - यादब देवकोटा
» उपलब्धि केलाई र विध्वंश केलाई भन्ने ? - महेश्वर शर्मा
» अब के हुन्छ ? (४) तारा सुवेदी
» साधना गलत भए साधककै पतन निश्चित - वेदराज पन्त
» चारैतिर नेताहरूको इमान र नैतिकतामाथि प्रश्न - यादब देवकोटा
» के चुनाउ हुन्त छ ? धेरैको प्रश्न यही छ आज - महेश्वर शर्मा
Page 14/21: « :: ... 11 12 13 14 15 16 17 ... :: »